सरकारले खोस्यो टेलिकमका ३ जना कर्मचारीको शेयर « TechPana | Digging into Tech
सोमबार, असार ८, २०७७ ०९:२०
आईफोनमा स्टोरेज फुल हुने समस्याबाट दिक्क हुनुहुन्छ ?
आज रातीबाट रिचार्जमा २ प्रतिशत कर, केही समय
४ क्यामेरा भएको सस्तो स्मार्टफोन सामसङ ग्यालेक्सी ए
एनसेलको नयाँ अफर, प्रति मिनेट ८ पैसामै कुरा
अब साना करदाताले मोबाइल एपबाटै राजस्व बुझाउन सक्ने
सरकारले खोस्यो टेलिकमका ३ जना कर्मचारीको शेयर
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) मा कार्यरत तीन जना कर्मचारीको नाममा रहेको शेयर सरकारले तानेको छ । उनीहरुको नाममा रहेको ४५ सय कित्ता सर्वसाधारण सेयर सरकारले आफ्नो नाममा सारेको हो ।
विभागीय कारबाहीमा परेका, पढ्न विदेश गएर नफर्किएका, लामो समयदेखि कार्यालयमा उपस्थित नभएर पद गुमाएका कर्मचारीको नाममा रहेको ४५ सय कित्ता शेयर कम्पनीको संस्थापक नेपाल सरकारको नाममा गएको टेलिकमका प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।
भण्डारीका अनुसार कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीको हैसियतअनुसार योग्य कर्मचारीले शेयर बाँडफाड हुँदा नियमअनुसार शेयर प्राप्त गर्दै आएका छन् । सोही अनुसार ती तीन जना कर्मचारीको नाममा शेयर छुट्याइएको थियो ।
तर, लामो समयदेखि कार्यालयमा उपस्थित नहुँदा अहिले आएर त्यस्तो शेयर सरकारको नाममा गएको हो । यसबाट सरकारको शेयर स्वामित्वमा झिनो अंक भएपनि थप हुनेछ । तर, शेयर संरचनामा भने कुनै किसिमको असर नपर्ने भण्डारी बताउँछन् ।
उनका अनुसार हाल नेपाल टेलिकममा नेपाल सरकारको सेयर पूँजी ९१.४९ प्रतिशत रहेको छ । नागरिक लगानी कोषको ०.०३ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ८.४८ प्रतिशत रहेको छ ।
कर्मचारीको ४५ सय कित्ता शेयरले नेपाल सरकारको सेयर संचरनामा खासै फरक पार्दैन । नेपाल टेलिकमको चुक्तापूँजी १५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ।
जसमध्ये नेपाल सरकारको १३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने सर्वसाधारणको एक अर्ब २७ करोड रुपैयाँ र नागरिक लगानीकोषको ४५ लाख रुपैयाँ छ ।
एफटीटीएचमा टेलिकमको आकर्षक अफर, ८५७ रुपैयाँमै १५ एमबीपीएस, साथमा ३ हजार मिनेट भ्वाइस
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले एफटीटीएचमा बिहीबार देखि लागु हुने गरी विभिन्न अफर उपलब्ध गराएको छ
टेलिकमको पोस्टपेड सिम अब ५ सय रुपैयाँमा
काठमाडौं । अब पाँच सय रुपैयाँमै नेपाल टेलिकमको पोस्टपेड सिमकार्ड खरिद गर्न सकिने भएको छ
स्मार्ट टेलिकम र यूटीएलले भाकाअनुसार तिर्न सकेनन् ३ अर्ब ६१ करोड बक्यौता
काठमाडौं । असार मसान्तको समयमा विशेष गरी करदातालाई राजश्व बुझाउने र सरकारलाई कर उठाउने चटारो
भाइबर, म्यासेञ्जर, ह्वाट्सएपजस्ता ओटीटी सेवाबाट राजस्व उठाउन महालेखाको सुझाव
काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको ५७ प्रतिवेदनले भाइबर, म्यासेञ्जर, ह्वाटसएप, स्काइप, वीच्याट, इमाे, जूम लगायतका ओटीटी
एनसेलको नयाँ अफर, प्रति मिनेट ८ पैसामै कुरा गर्न सकिने
१५ अर्ब युजरनेम तथा पासवर्ड लिक, तपाईंको त परेन ?
एकसाथ ४० जिल्लामा नयाँ प्रविधिको वायरलेस वाईफाई सुरु गर्दै एनसेल
नेपाल आइपुग्यो सस्तो आईफोन एसई, कति छ मूल्य ?
कनेक्ट आईपीएसको पहिलो वर्षकै कारोबार २ खर्ब ५ अर्ब
अब घरायसी कामका लागि अनलाइनमै यसरी खोज्नुहोस् दक्ष प्राविधिक